Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dilka Sakariya & Sowdo | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dilka Sakariya & Sowdo
Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dilka Sakariya & Sowdo
Wasiirka Wasaaradda Cadaallada Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen uga tacsiyadeeyay, kuwaas oo xaley gacan ka xaq daran ugu dishey magaalada Muqdisho.
“Falakaan foosha xun markuu dhacay waxaan la xiriirey hayadaha amniga ee baarista iyo ka daba tagista fal dembiyeedyada ku shaqada leh ee ay ugu horeeyaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, sidoo kale waxaan la hadley qaar ka mid ah eheladii dhibtu gaartey. Ciidamada amaanka waxay ii xaqiijiyeen in ay baaris socoto lana daba joogo falkaan cidii geysatey ayuu yiri” Wasiirka.
Sidoo kale wuxuu jadalkisa uu intaasi ku daray in Shacabka Soomaaliyeed uu u balan qaadayo, iyadoo loo maraayo hanaanka Cadaalad u raadinta dhibanaha in la hor keeni doono Cadaalada cid alaale cidii falkaan foosha xun geysatay.
Dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay dilka Sakariye iyo Sowdo oo walaalo ah, iyada oo Ehelladooda ay Maanta ka dalbadeen dowladda Soomaaliya inay cadaalad u helaan dilkaas.
Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay dilka Sakariya & Sowdo was last modified: December 3rd, 2021 by warsan radio
Ajendaha Kulanka Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Berri oo la shaaciyay
Xasan Sheekh oo ka digay in dalku noqdo Dastuur la’aan (Qoraal uu u diray Madaxda dalka)
Dadaalo lagu dhameynayo khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble oo markale ka bilowday Muqdisho